'गल्ती ढाकछोप' गर्न अपहरणकारीको प्रहरी ईन्काउण्टर ! | Citizen Post News
काठमाडौं । भनिन्छ,‘हत्या गर्नेभन्दा बचाउने महान हुन्छ ।’ तर आइतबार अपहरित ११ बर्षीय बालक निशान खड्कालाई न प्रहरीले बचाउन सक्यो, नत अपहरणकारीलाई पक्राउ गरी हत्याको थप रहस्य ओकल्न सक्यो । के था ? हत्या र अपहरणको प्रमुख योजनाकार अरु कोही नै थिए कि ? प्रहरीले जवाफी कारवाहीको नाम दिएको ईन्काउण्टरपछि त्यो संभावनाको ढोका बन्द भएको छ ।
राजधानीमै अपहरण र बालकको हत्यापछि भड्किन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै प्रहरीले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न दुई जना अपहरणकारीलाई ईन्काउण्टर गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ । ईन्काउण्टर गर्नका लागि अपराधि भेट्टाउन सक्ने प्रहरीले किन बालकलाई अपहरणबाट सकुशल मुक्त गर्न सकेन ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । तर अपराध गर्नेलाई पक्कै पनि सजाय दिनुपर्छ । अपराधिहरुले सजायबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।
सिन्धुपाल्चोक घर भई काँडाघारीमा आमासँग बस्ने ११ वर्षीय बालक निशानको अपहरण पश्तात् हत्या भयो । फरार भनिएका दुई अपहरणकारी महानगरीय अपराध महाशाखाको ईन्काउन्टरमा मारिए । नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरीमाथि फाईरिङ खोलेपछि प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा सिन्धुपाल्चाोकका २३ बर्षीय अजय तमाङ र नुवाकोटका २२ बर्षिय गोपाल तमाङ मारिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताव सिंहले बताए ।
तर अघिल्लो दिनमै अपहरणको सूचना र अपहरणकारीको डिमाण्डबारे जानकारी पाएको प्रहरीले किन बालकलाई बचाउने प्रयास गरेन ? अपहरणजस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरी तत्काल किन कारबाहीमा उत्रिएन ? के त्यो प्रहरीको कमजोरी होइन ? अपहरणकारी तमाङद्वयले आइतबार साँझ ११ वर्षीय बालक खड्काको अपहरण गरी राति ९ बजे फोन गरेर ४० लाख फिरौती माग गरेका थिए । २४ घन्टा नवित्दै ईन्काउन्टर गर्न सक्ने प्रहरीले २४ घण्टा नवित्दै अपहरित बालकको सकुशल उद्धार गरेको भए प्रहरी संगठनको ईज्जत कहाँ पुग्थ्यो ?
कमसेकम नेपाल प्रहरीप्रति सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । वैध हतियार बोक्नेले ईन्काण्टर गर्नु कुनै नौलो काम र पुरुषार्थ होइन । बरु, अपहरित बालकलाई जिवितै उद्धार गर्न सकेको भए नेपाल प्रहरीको हाईहाई हुनेमा कुनै शंका थिएन ।
४० लाख फिरौतीको कथाः
अपहरणकारीको शिकार भएका निशान सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची स्थायी घरभई हाल काँडाघारीमा आमासँगै बस्दै आएका थिए । उनी काँडाघारी नजिकै हाईल्याड स्कुलमा कक्षा ६ पड्दै आएका थिए भने उनकी आमा चिया पसल चलाउँदै आएकी थिईन । उनका बाबु वैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा मलेसीयामा भएको प्रहरीको भनाई छ ।
बालक अपहरणमा परे लगत्तै अपराध महाशाखाको टोलीले उपत्यकाका सिज गरी अनुसन्धान थालेको थियो । बेलुका ६ बजे घरबाट निस्किएका बालक फिर्ता नआएपछि उनको खोजी भएको थियो । बालकको खोजी भईरहदा राति ९ बजे पहिलोपटक अपहरणकारीले फोन गरेर ४० लाख रुपैयाँ फिरौती माग गरेका थिए ।
तर प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसक्दा आइतबार अपहरित निशानले अकालमै ज्यान गुमाए । अपहरणपछि बालकको हत्या भएसँगै राजधानीबासी कति पनि सुरक्षित नभएको महसुस गर्न थालिएको छ । जबकि आइतबार राति ९ बजे नै निशानकी आमा चमेलीले छोरा अपहरणमा परेको र अपहरणकारीले ४० लाख रुपैयाँ फिरौती माग गरेको सूचनासहित प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन । अनुसन्धानमा प्रहरी यहाँ चुकेको छ । फोटोः मिडिया फाइल